Dr. Soe Lwin – Healthy Life Journal
Posts By Dr. Soe Lwin
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ အရပ်လက်သည်နဲ့ ဗိုက်ပြင်တာ၊ ဗိုက်လှည့်တာလုပ်ရင် ဘာဖြစ်တတ်ပါသလဲ . . .
———၊ ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊——— Q. ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ အရပ်လက်သည်တွေနဲ့ ဗိုက်ပြင်တာ၊ ဗိုက်လှည့်တာက ကောင်းပါသလား ဆရာ။ A. ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ အရပ်လက်သည်တွေနဲ့ ဗိုက်ပြင်တာ၊ ဗိုက်လည့်တာတွေလို အလေ့အထတွေက ရန်ကုန်မြို့ မှာတောင် ရှိနေတုန်းပဲ။ တစ်နေ့ကဆိုရင်...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေကို ရှောင်သင့်ပါသလဲ
—–၊ ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊—– Q. ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေအနေနဲ့ အစားအသောက်တွေကို ရှောင်ရမယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ ရှောင်ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေကို အဓိက ရှောင်သင့်ပါသလဲ ဆရာ။ A. ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ အစားအသောက်က သိပ်အရေးကြီးတာပေါ့။ မိခင်စားလိုက်တဲ့ အစားအသောက်တွေက...